China EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | Amulite
Ny tontolon'ny sandwich sandan'ny EPS simenitra maivana dia vokatra vaovao amin'ny rindrina, izay manana endri-javatra tsara amin'ny famerenana angovo, fiarovana ny tontolo iainana, fanamafisam-peo, fanamafisam-peo, lanja maivana, izay mahatonga ny vokatra toy izany halaza eran'izao tontolo izao.
Fampidirana ny famokarana
3. Rafitra fananganana fitaovana EPS
Anisan'izany: Masinina miorina amin'ny EPS, Screw Conveyor, Farafara mirehitra, Teti-pitaovana sy kojakoja faharoa, lohan'ny mixer sy kojakoja;
4. Fiara bobongolo amin'ny rindrina mitsivalana
Ny mpamorona lasitra mitsangana mitsangana dia afaka mamokatra 10 Pcs indray mandeha. Ka ny fahafaha-mamokatra dia avo kokoa.
5. Manala fiara mandeha ho azy
Manala tanteraka ny tontolon'ny rindrina izy io. Afaka mamoaka takelaka 5 indray mandeha ary mila 20 minitra ho an'ny fiara bobongolo iray, izay manatsara ny fahaiza-manao sy mamonjy ny vidin'ny asa.
6. Rafitra fifindrana fiara mandeha ho azy
Anisan'izany: Rafitra mihetsiketsika, izay mahatonga ny fiara bobongolo hifindra malalaka eo anoloana sy any aoriana; Rafitra Fiara Fiara, izay mahatonga ny fiara bobongolo afaka mifindra eo anelanelan'ny lalamby samihafa;
7.P LC Fanaraha-maso kabinetra
Ho an'ny rafitra fanaraha-maso dia mampiasa rafitra PLC SIMENS izahay amin'ny kalitao avo kokoa.
Teo aloha: Non-Asbestos / Asbestos simenitra vita amin'ny roof vita amin'ny tampon-taratasy
Manaraka: Calcium Silicate Board / Fiber Cement Board
Eps Ciment Sandwich Panel bobongolo
Masinina Fitaovana Sandwich Sandwich Eps Concrete
Masinina fanaovana birao tontonana Eps Sandwich Panel
Masinina Panel Sandwich Eps
Eps Sandwich Panel fanaovana milina
Masinina Panel Sandwich Eps Sandwich